Mareykanka oo labo dagaalyahan oo Al-Shabaab ah ku dilay duqeyntiisii ugu horeysay tan iyo April - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMareykanka oo labo dagaalyahan oo Al-Shabaab ah ku dilay duqeyntiisii ugu horeysay tan iyo April
May 18, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Milatariga Mareykanka ayaa fuliyay duqeyntoodii ugu horeeyay ee ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan Soomaaliya tan iyo horaantii bishii April.
Duqeynta ayaa ka dhacday deegaanka Kuunya Barrow ee gobolka Shabeellaha Hoose Axadii, sida ay war-saxaafadeed ku sheegeen Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM).
Weerarkii ugu dambeeyay ee Mareykanka ee gudaha Soomaaliya ayaa dhacay 10-kii April.
Weerarada cirka ayaa siyaasaday sanadihii u dambeeyay, taasoo qeyb ka ah dadaalada ciidamada Soomaaliya ay kula dirirayaan maleeshiyada Al-Shabaab, oo dhowr iyo toban sanno dagaal ka wada dalka.
Sanadkan gudihiisa, Mareykanka ayaa gudaha Soomaaliya ka fuliyay ku dhawaad 40 duqeymood oo ka dhan ahaa maleeshiyada Al-Shabaab, oo lagu dilay tobanaan dagaalyahan.
November 4, 2018 Hoggaamiyaasha dhaqanka oo dadaalo nabadayn ah ka wada deegaanka Dhumay
August 20, 2019 Hal dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn ay diyaaradaha Mareykanka ka fuliyeen gobolka Shabeellaha Hoose
Madaxweynaha Puntland oo wacad ku maray in ay cadaalada horkeeni doonaan kuwa ka dambeeya qaraxii lagu dilay guddoomiyaha gobolka Mudug
Dadkii ku dhaawacmay qaraxii Muqdisho oo Turkiga lagu daaweyn doono
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dadkii ku dhaawacmay qaraxii gaariga ee Muqdisho ee Sabtidii shalay ayaa daaweyn caafimaad loo geyn doonaa Turkiga, sida ay ku warantay wakaalada wararka Turkiga ee Anadolu oo soo xiganaysa afhayeen u hadlay madaxtooyada [...]